Kooxda Manchester United oo Ka Adkaatay Kooxda Liverpool “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Liverpool ayaa waxaa garoonkeeda Anfield 1-2 uga badiyay kooxda Manchetser United.
Labadan kooxood ayaa tartan ugu jiro kaalinta afaraad ee horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga.
Kooxda Manchester United ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 14-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Juan Mata,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Garsoorihii ciyaarta Martin Atkinson aya bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta kaarka casaanka ah uu taagay ciyaaryahan Steven Gerrard oo bedel ku soo galay qeybtii danbe ee ciyaarta,isagoo garoonka ku jiray 45-ilbiriqsi oo kaliya.
Ciyaaryahan Juan Mata ayaa daqiiqadii 59-aad ee ciyaarta goolka labad u dhaliyay kooxda Manchester United.
Ciyaaryahan Daniel Sturridge ayaa daqiiqadii 69-aad ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxda Liverpool.
Kooxda Manchester United ayaa xajisatay kaalinta afaraad ee horyaalka,waxana ay leedahay 59-dhibcood,halka kooxda Liverpool ay horyaalka uga jirto kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 54-dhibcood.